မြန်မာပြည် ဈေးကွက်မှာ အောင်မြင်တဲ့ Cadillac - .::just for share::.
Home » Information » မြန်မာပြည် ဈေးကွက်မှာ အောင်မြင်တဲ့ Cadillac
မြန်မာပြည် ဈေးကွက်မှာ အောင်မြင်တဲ့ Cadillac
ပုံမှာ မြင်တွေ့ နေတာ ကတော့ Cadillac SRX 2014 ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ဆလွန်း ဆန်ဆန် မြင်တွေ့ ရတဲ့ကား ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင် အရွယ် ၄၆၀၀ စီစီ ရှိပါတယ်။ ဇိမ်ခံ ကားများမှာ ပါဝင်တဲ့ ဖီးချား အားလုံး ပါဝင် ပြီးတော့ အဆင့်မြင့် နည်းပညာ အသစ်များစွာ ပါဝင် ပါတယ်။ အသစ်ကား ဖြစ်တာကြောင့် ပျက်ဖို့လည်း ခဲ ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ကလည်း များပါ လိမ့်မယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် နောက်ဆုံးထွက် မော်ဒယ် ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံနေ မြန်မာပြည်ကို တိုက်ရိုက်လာတဲ့ကား ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အမရိကန် Cadillac တရားဝင် အရောင်း စင်တာ မရှိသေးပေမယ့် အသစ်ကို မှာပေးတဲ့ အေးဂျင့်များစွာ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဝန်ဆောင်ခနဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် သူလည်း ဈေးမနည်း ပါဘူး။ တစ်ပတ်ရစ် ကယ်ဒဲလစ် ဆလွန်း ဝယ်စီးတာတောင် သိန်း ၇၀၀ ဝန်းကျင် ရှိတာ အသစ်လည်း ဖြစ်၊ မော်ဒယ်လည်း မြင့်၊ အင်ဂျင်လည်း ကြီးဆိုတော့ သိန်း ၃၀၀၀ တော့ ပြေးမလွတ် ပါဘူး။ လက်တလော ကာလ အခွန်လျော့ချပေးမှု များကြောင့် အမြင့်ကား မှာသူများ အနေနဲ့ အမေရိကန် ကားများကို ကြိမ်းသေ ဦးတည်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကျရင် ကယ်ဒဲလစ်က ကြိမ်းသေ ပါမှာပါ။
စတိုင်လည်း ကျ၊ စွမ်းဆောင်ရည်လည်း မြင့်တာကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာလည်း တိုယိုတာ Lexus နဲ့ ပြိုင်နေတဲ့ကား ဖြစ်ပါတယ်။ www.motors.com.mm မှာ ကယ်ဒီလဲ အသစ် အဟောင်း များကို ဈေးနှုန်းနဲ့ တကွ ဖော်ပြထားတာ တွေ့လိုက် ရလို့ ပါ။ Youtube မှာ ဖော်ပြတဲ့ ကယ်ဒဲလစ် ကား ကြော်ငြာနဲ့ စမ်းသပ် မောင်းနှင် မှုများကို http://www.youtube.com/user/cadillac ထဲမှာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။